Tag: akawanda maseru spf | Martech Zone
Tag: akawanda maseru spf
Akawanda Maseru mune yako SPF Rekodhi
Muvhuro, Ndira 14, 2013 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Isu takawedzera runyorwa rwedu rwevhiki nevhiki (ive shuwa kusaina!) Uye ini ndakaona kuti edu akavhurika uye tinya-kuburikidza nemitengo yakaderera kwazvo. Mikana ndeyekuti mazhinji emaemail haasi kuigadzira kuinbox zvachose. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti isu taive nePSF rekodhi - iyo DNS zvinyorwa zvinyorwa - izvo zvisina kuratidza kuti yedu nyowani email sevhisi mupi anga ari mumwe wevatumwa vedu. Vashandi veInternet vanoshandisa iyi rekodhi ku
Cappuccino uye Nhema dzeKutakura
Muvhuro, Ndira 12, 2009 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakamira yeMcSkillet burrito munzira yekuenda kubasa. Ini pamwe ndinogona kunyora posvo pamusoro pekuti ndinovada zvakadii uye neQdoba breakfast burritos, asi ini ndichakurega iwe. Pandakanga ndiri kuMcDonalds, kuda kwangu kwakazondikurira uye ndikaraira McCafe Mocha pane kumira panzvimbo yandaifarira yekofi. Mavara, akaomesesa zviratidzo uye kurongedza nematoni epasi akakukomberedza uye anoita kuti unzwe senge